Terje Vigen, iyo isingazivikanwe nhetembo yaHenrik Ibsen | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Del Grimstad Adressetidende. Mutambi weNorway uye director Trond Espen Seim apfuura Nyamavhuvhu 4 mushure mekuverenga Terje Vigen pamazuva eIbsen-Hamsun akaitirwa muGrimstad.
Uye inofungidzirwa ingangoita saDon Quixote munyika yeNordic kubva kwairi Henrik Ibsen ndiye pasina mubvunzo munyori wenyaya wekutamba uye mumwe wevanyori vekuNorway. Kwekupedzisira Nyamavhuvhu mazuva eIbsen neHamsun akaitika, uko, senguva dzose, iyo Terje Vigen, nhetembo inotsanangura, isingazivikanwe kune muverengi akajairika, uyo anotaurira imwe yeaya epic nyaya ane protagonist anova ngano yenyika. Saka ndinomuunza padyo padyo nevanhu uye ndinofamba famba Ibsen.
2.1 Iyo bhaisikopo
Akazvarirwa mukati Skien Muna 1828, Ibsen, mutambi wenhau wekuNorway uye mudetembi, ndemumwe wevanyori vane mukurumbira pachiitiko chazvino. Yake Imba yeDhora, ine protagonist yayo Nora, ndeimwe yeinonyanya kuzivikanwa nguva dzese uye yazvino mazuva ano nekuda kwekupomedzerwa kwayo kwevakadzi. Mamwe mabasa anozivikanwa ndeaya muchiso, Vezera Gynt o Hedda Gabler.
Chinyorwa chikuru che mutambo wazvino uno, mabasa ake akaonekwa zvinosemesa munharaunda ye hunhu hwekukunda achikunda, sezvaakavabvunza pachena. Kana ivo havana kurasikirwa nehunhu hwavo nekufamba kwenguva uye zvinoramba zvichiitwa nguva dzose. Pasina kuenda kumberi iyo National Theatre Oslo inopemberera inotevera Ibsen mutambo kubva 8 kusvika 19 wemwedzi uno.
Chikamu cheIbsen uye basa rekunyora hazvizivikanwe kutenderedza zvikamu izvi, asi zvinozivikanwa kwazvo munyika dzeNordic. Kubva Terje Vigen kunyanya, asiwo nedzimwe nhetembo, zvinonzi ivo vava rudzi rwekuunganidzwa hunodzidziswa nevana senge pano Quixote.
Terje Vigen inhetembo inoshamisa ya 52 stanzas iyo Ibsen yakaburitswa mu 1882. Iyo inotaurira inonakidza nyaya yemurume, mufambisi akashinga uye asingatyi iyo, mu napoleonic hondo, panguva yekuvharwa kweChirungu kweNorway mu 1809, uye neyake mhuri padhuze nerufu kunze kwenzara, akakwasva kubva kuMandal kuenda kuDenmark kuunza bhari.
Nhetembo iyi yakaitwa kubva ipapo mafirimu anoenderana a mimhanzi.
Nezita remusoro unoreva mitsara miviri yekutanga kubva nhetembo "Pane imwe nguva paive nemurume mukuru pachitsuwa chisina mvura," iyo firimu (Murume Aivapo) chinjaidzo cheSweden, chiri cheiyo Silent movie, uyo akapfura uye akaisa nyeredzi Víctor Sjöström muna 1917. Mumaminetsi makumi matanhatu tinoona nyaya yaTerje Vigen, mubati wehove anogara nemukadzi wake (Bergliot Husberg) nemwanasikana wavo mumusha uri kumahombekombe ekumaodzanyemba kweNorway.
En 1809, nekuda kwekudzivirira kwaNapoleon kondinendi kuEngland, mukuru wemauto anouya mumusha kuzotaura izvozvo haugone hove pane chinhambwe kubva kumahombekombe kana kusvika Jutland yakavakidzana. Kuti udzivise izvi, Terje Vigen yakatsaurirwa kuna contraband kutakura pamwe nemhenderekedzo yeDenmark. Nekudaro, mune imwe yeidzi nzendo anopedzisira awana a chirungu chikepe iyo yaanokwanisa kunzvenga pakutanga. Rombo rakaipa rinoda izvo, nguva inotevera uye mushure mekudzingirirana, Terje Vigen kubatwa.
Wakatungamirirwa kune igwa, iwe uchaendeswa kune jeri Chirungu kwaachange ari kusvika 1815. Paanodzoka ku musha wake, anozviona zvinhu zvese zvachinja. Vamwe vavakidzani havatomboziva iye uye paanosvika kumba, anodzidza kubva kune vaviri vakaroora vanogara mairi izvo mudzimai wake nemwanasikana mudiki vakafa nenzara. Pfungwa yake ndeyekuti anodonha uye gare gare, apererwa, asvika kumakuva kuti aone makuva avo.
Kuti uenderere mberi kunyangwe uchigadziriswa, tsvaga rimwe basa semutyairi wendege yezvikepe, asi zvishoma nezvishoma vanotora chigumbu, chigumbu uye kuda kutsiva. Rimwe zuva vanhu vemuraini vanoona a igwa izvo zvava kuda kunyura. Terje Vigen, kunyangwe zera rake asi nekuda kwehunyanzvi hwake, anoenda kunobatsira vanogara mungarava. Asi ipapo Ziva kaputeni wechirungu uyo akamubata ndokumuendesa kujeri.
Kupererwa uye ruchiva rwekutsiva zvinomutungamira kuraira vafambisi vengarava kuti vasiye chikepe, apo anomanikidza kaputeni, mudzimai wake nemwanasikana kuti vapinde mungarava yake kuti vanyure. Ruvengo rwusingaoni runoita bata musikana nechinangwa chekumuurayaasi akatarisa kumeso kwake, anorangarira mwanasikana wake chaiye uye hunhu hwake hwekare hunowonekazve mutsa. Anotya nezvaanga achizoita uye anovaisa zvakanaka pane mamwe matombo kusvikira vamwe vemunharaunda vavaunganidza vese voenda navo kumusha.
Pakupedzisira, vaviri vacho nemwanasikana wavo vanoenda kumba kwaTerje Vigen ku ndinokutendai pachenyu uye vanosiya iye achienda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Terje Vigen, iyo isingazivikanwe nhetembo yaHenrik Ibsen
Mermaids uye Iyo Gypsy Mwenga. Mbiri huru nhema nhema opera.
George Simenon: Hupenyu hweMabhuku uye Zvekuita Zvepabonde.